at 2:38 PM Labels: Do It Yourself
ကျွန်မမောင်နှမများကို ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဒိန်ချဉ်လုပ်နည်းလေး လက်ဆင့်ကမ်းပါရစေ။ (ကျွန်မရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲမှ အမတစ်ယောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပညာတော်သင်သွားရင်း ရလာခဲ့တဲ့နည်းလေးကို ကျွန်မ တဆင့် ပွားပေးလိုက်တာပါ)။
ဒိန်ချဉ်လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ နွားနို့ရယ်၊ သံပုရာရည် (သို့မဟုတ်) ဒိန်ချဉ် လက်ဘက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းတို့ပါနော်။ နောက်ပြီး ဒိန်ချဉ်နဲ့တွဲဖက်သောက်သုံးမယ့် ထန်းလျက်ရည် (သို့မဟုတ်) သကြား၊ ပျားရည် စတာတို့ပေါ့နော်။
ဒိန်ချဉ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ ဒိန်ချဉ်တည်မယ့် အိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အ၀ကျယ်ပုလင်း၊ ဖန်ပန်းကန်စတာတွေကို သန့်စင်အောင် ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ပြီး ဆေးရပါတယ်။ အသုံးပြုမယ့် ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးကို တတ်နိုင်ရင် ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ဆေးပြီးမှ သုံးပါ။ တခြားဟင်းနံ့တွေနဲ့လည်း မရောစေအောင် သတိထားပြီးမှ လုပ်ပါနော်။
နွားနို့အပြင် တခြားသော နို့ (ဆိတ်နို့၊ ကျွဲနို့) စတာတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆီထုတ်ထားတဲ့နို့ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီးသင့်လျော်ပါတယ်။ နွားနို့ (၁) လီတာကို မီးအားပြင်းပြင်းနဲ့ ပွက်ပွက်ဆူအောင်ကျိုပါ။ ပြီးရင် နောက်ထပ်နွားနို့အစိမ်းကို ထပ်ထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင် ထပ်ကျိုပေးပါ။ အဲ့ဒီလိုကျိုပေးရင်းနဲ့ မလိုင်ထူထူနဲ့ နွားနို့ဆူဆူလေး ရပါပြီ။ နွားနို့ဆူပြီဆိုတာနဲ့ ဒိန်ချဉ်လုပ်မယ့် မြေအိုး ဒါမှမဟုတ် ခွက်လေးတွေထဲကို နွားနို့ပူပူလေးတွေလောင်းထည့်ပေးပါ။ ထည့်ပြီးသား နွားနို့တွေကို ၂ မိနစ်လောက် ခဏမွှေပေးပြီး အအေးခံထားပေးပါ။ နို့ထည့်ထားတဲ့ ဗူးလေးကို လက်ဝါးလေးကပ်ပြီး အသာစမ်းကြည့်ပါ။ ခပ်နွေးနွေးလေးဖြစ်ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီနို့ထဲကို သံပုရာရည်တစ်စက် (ရေစက်ကလေးတစ်စက်) စာလောက်ထည့်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အရင်ရက်က လုပ်ထားတဲ့ ဒိန်ချဉ် လက်ဘက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ ထည့်ပေးပြီး အဲ့ဒီအိုး/ပုလင်း/ဗူးကို မလှုပ်မယှက်စေဘဲ (၆) နာရီကြာအောင် အခန်းအပူအချိန်အတိုင်း ထားပေးပါ။ (၆) နာရီနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ အဲ့ဒီနို့လေးတွေဟာ ခဲပြီး အပေါ်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေ နည်းနည်း တက်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲ့ဒီအရည်တွေကို တချို့ကလည်း ခပ်ထုပ်ပစ်ကြသလို တချို့ကလည်း ဒီအတိုင်းထားပါတယ်။ ရလာတဲ့ ဒိန်ချဉ်ဗူး/အိုး/ပုလင်းကိုမှ အဖုံးအုပ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းဆိုရင် အနည်းဆုံး ၃ ရက်ကနေ ၅ ရက် တစ်ပတ်ထိ အထားခံပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်နဲ့ တွဲဖက်သောက်သုံးဖို့အတွက် ထန်းလျက်ရည်ကျိုမယ်ဆိုရင်လည်း ထန်းလျက် ၅၀ သားကို ရေတစ်လီတာနဲ့ရောကျိုပြီး အမှိုက်၊ သဲမပါအောင် သေချာစစ်ပြီးမှ ခပ်ပျစ်ပျစ်ရအောင် ကျိုပေးပြီး အအေးခံထားပါနော်။ သကြားနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်းရောပြီး ခပ်စားလိုက်ရုံပါပဲ။ တချို့ကလည်း ပျားရည်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး စားသုံးကြပါတယ်နော်။ တချို့ကလည်း ဒိန်ချဉ်ကို ရာသီပေါ်အသီးအနှံတွေထည့်ပြီး စားသုံးတတ်ကြ ပါသေးတယ်။
ကျွန်မအကြိုက်ကတော့ ဒိန်ချဉ်ထဲကို ထန်းလျက်ရည်ချိုချိုပျစ်ပျစ်လေးထည့်ပြီး မွှေစားလိုက်တာပဲ။ ကလေးတွေကတော့ ရေခဲတုံးလေးတွေထည့်ပေးရင် ပိုကြိုက်ကြတယ်။ အမေကတော့ ပျားရည်လေးနဲ့ ပိုကြိုက်တယ်တဲ့။ ကျွန်မရဲ့ မောင်နှမတွေကရော ဘယ်လိုမျိုးများ ကြိုက်ကြလဲဟင့့့် 
sawthanlwin August 3, 2008 at 3:39 AM
i like with sugar, very good to know that.thank you!
po2h November 3, 2009 at 12:30 PM
i can't click 'more'
လုလု November 11, 2009 at 12:40 AM
po2h ရေ့့့
po2h November 15, 2009 at 10:48 AM
Ma lu lu thank you naw. i can read now
Anonymous March 3, 2010 at 9:43 AM
Thank you for the recipe on yogurt. I'm gonna try it tomorrow. I used to think it might be very complicated to make one. Thank you.
Mi Ju June 22, 2011 at 11:01 AM
ရန်ကုန်ကလှည်းကလေးဒိန်ချဉ်လို မလိုင်ဖတ်လေးတွေထည့်စားချင်တယ်။အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ သိရင် ရေးပေးပါနော် မလု။
yuki January 25, 2012 at 11:23 AM
ဒိန်ချဉ်ကို စမ်းတာ ပျက်ပျက်သွားတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ သံပရာရည်တစ်စက်ညှစ်ပြီးရင် မွှေရမှာလား။
မလှုပ်ရဘူးဆိုလို့ သံပရာရည်ညှစ်ပြီး မမွှေပဲထားတာ ဒိန်ချဉ်က မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..ခွက်တွေလည်း ရေနွေးနဲ့သေချာဆေးပေးတယ်..လိုတာရှိရင်ပြောပြပေးပါနော်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Maung Zo Phay April 17, 2014 at 5:06 AM
Hi Ma lu lu.thanks for share ur talent.
yaa.. how is after put in lemon drop do we need to shake or not. the other thinks is can we boil and make yogurt from the one the sell from wall mart or from store.ready made regular milk?